Hanao amboletra eny amin’ny 13 mey ny AFP : handray ny fepetra sy hisambotra avy hatrany ny Emmo/Reg (NewsMada) | AEMW
Hanao amboletra eny amin’ny 13 mey ny AFP : handray ny fepetra sy hisambotra avy hatrany ny Emmo/Reg (NewsMada)
Raha efa nilaza fa tsy hihemotra amin’ny fikasany hidina an-dalambe hamory vahoaka etsy amin’ny kianja 13 mai, rahampitso, ny Antso ho fanavotam-pirenena (AFP), nampitandrina ny handray fepetra, hisambotra avy hatrany ary hampiasa ny hery eo am-pelatanany kosa ny Emmo/Reg.
Inona no hiseho rahampitso ? « Baiko sy toromarika avy amin’ny prefet ary hampiharin’ny Emmo/Reg ny hanakanana amin’ny fomba rehetra izany hetsika tsy nahazoana alalana izany. Hanao ny tsy hampisy fanakorontanana ary hisambotra mihitsy izahay raha mbola misy manao izany eo », hoy ny lehiben’ny CIRGN Analamanga, ny Jly Rakotomahanina Florens, omaly tetsy Ankadilanana. Nohamafisiny fa tsy maintsy raisina ny andraikitra sy ny fepetra rehetra tsy hisian’ny fanangonana olona eny amin’ny kianjan’ny 13 mey ary hampiasaina ny fitaovana mifanaraka amin’izany. Toy ny mahazatra, efa nahazo vaovao na tsy tena mbola voamarina aza ny mpitandro filaminana. « Misy amin’ireo olona ireo hono hitifitra ao anaty vahoaka ao ka hilazana fa ny mpitandro filaminana no nanao izany… », hoy ihany izy ireo. Natsidiky ny Emmo/Reg anefa fa mitovy daholo ny laharan’ny fitaovam-piadiana any amin’izy ireo ary rehefa any amin’ny ora farany, tsy afa-manoatra intsony sy tena mitombo ny fandrobana na ny famonoana olona vao mampiasa izany izy ireo.
Ho marobe ny mpitandro filaminana
Tsy vitan’izany fa hohatevenina ny mpitandro filaminana, ankoatra ny fepetra efa mahazatra. « Ho marobe izahay mba ahafahana miaro ny olona sy ny fananany…. Anjaranay mpitandro filaminana telo tonta ny manao izany. Ho avy mialoha ny Emmo/Reg ary hohamafisina ny fanaraha-maso sy ny fisavana ireo ahiahiana », hoy ny lehiben’ny Emmo/Reg, ny Kly Ravoavy.
Anisan’ny fepetra ankapobeny horaisin’izy ireo ny fanamafisana ny loharanom-baovao. Ny fametrahana andiana mpitandro filaminana tsy manao fanamiana hijery ireo olona miketrika fanakorontanana sy ireo mbola mikiry hanao hetsika tsy nahazo alalana. Eo koa ireo handeha moto ka afaka miditra an-tsehatra avy hatrany…. « Hotazonina mialoha io kianja io ka ireo olona rehetra hitangorona na hijanona eo, tsy afaka hanao izany. Hosakanana mialoha ireo lalana handehanana eo », hoy ihany izy. Nanamafy izany ny amin’ny prefektiora fa tsy nametraka taratasy fangatahana alalana ny AFP ka hiroso amin’izany fepetra rehetra izany ny Emmo/Reg.
Tompon’ny fahefana ny vahoaka
Tsiahivina fa mbola nanamafy ny fahavononany ho etsy amin’ny 13 ny AFP tarihin’ny CT, Razafimamantany Faniry, afakomaly. « Antsika ny tany ary ny vahoaka no tompon’ny fahefana. Iza no nanao hetsika nangataka fahazoan-dalana, ka nahazo? Fandaniam-potoana izany fa amin’ny zoma ny fotoana… Hitondra porofo mivantana amin’ny filoham-pirenena amin’ny alalan’io hetsi-bahoaka io izahay fa mahantra ny vahoaka. Tsy ekentsika ary tsy nifanarahana amin’ny mpitondra amin’izao fotoana izao ny fanapotehana ny firenena », hoy izy. Marobe rahateo ireo antoko sy fikambanana nanoina ny antson’izy ireo ary vonona hiara-dalana. Mety hifandray amin’izany koa ny ho fanambaran’ny « Dinika ho an’ny fanavotam-pirenena », anio eny Andrainarivo.
← La réalité… (NewsMada)
Resaka « razoky » sa resak’olon-dehibe… (NewsMada) →